सय करोड क्लबमा पुग्यो 'जुग जुग जियो'को व्यापार, कति कमायो ?
बलिउड अभिनेता वरुण धवन र अभिनेत्री कियारा आडवाणी स्टारर ‘जुग जुग जियो’ले बक्स अफिसमा आक्रामक व्यापार गरेको छ । विश्वभर यस चलचित्रले १ सय करोडको आँकडा पार गरेको बताइएको छ । चल...
यस्तो छ ऐश्वर्या रायको फिल्म पीएस–१ को मोशन पोस्टर, कहिले हुन्छ सार्वजनिक ?
बलिउडका चर्चित निर्देशक मणि रत्नमको चलचित्र पोन्नियिन सेल्भन (पीएस–१) को मोशन पोस्टर सार्वजनिक भएको छ । लामोसमयसम्म चलचित्रबारे कुनै अपडेट नदिएको निर्माता टिमले मोशन पोस्टर सार्वजनिक गरेको हो ।&n...
क्यान्सरपीडित यी आसामी नायकको मृत्यु
भारतस्थित आसामका एक नायक किशोर दासको मृत्यु भएको छ । पछिल्लो एक वर्षदेखि क्यान्सर रोगसँग जुधिरहेको दासको शनिवार मृत्यु भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । ३० वर्षीय दासको मृत्यु चेन्नईस्थित अस्पतालमा...
आकाशप्रति पूजाको वान साइड लभ !
फिल्म ‘सम्झना बिर्सना’ को दोश्रो ट्रेलर बुढा सुब्बा डिजिटलमार्फत शनिबार दर्शकमाझ ल्याइएको छ । पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठ अभिनित फिल्म ३१ असारदेखि देशब्यापी प्रदर्शनमा हुदैछ । निमेष प्रधान लिखित ...
पूजाले नयाँ चलचित्रमा अनमोलसँग जोडी बाँध्दै
अभिनेता अनमोल केसी र अभिनेत्री पूजा शर्माले चलचित्रमा एकसाथ काम गर्ने भएका छन् । यी दुवैले चलचित्रमा पहिलोपटक सहकार्य गर्न लागेका हुन् । अभिनेत्री शर्माको आफ्नै होम प्रोडक्सनबाट बन्न लागेको चलचित्रका लागि अभिने...
कुमारी बैंक र बनेपा डेन्टल केयरबीच सम्झौता, ग्राहकलाई विभिन्न सेवामा छुट